Bokin' i Zakaria - Wikipedia
Bokin' i Zakaria
(tonga teto avy amin'ny Bokin'i Zakaria)
Ny Bokin' i Zakaria dia boky ao amin’ ny Tanakh (Baiboly hebreo) sy ao amin’ ny Testamenta Taloha ao amin’ ny Baiboly kristiana. Io boky io dia mirakitra ny toriteny sy ny fahitàn' i Zakaria. Ny fanamboarana ny Tempoly faharoa no tena nanahirana an’ i Zakaria sady nitoriany ny amin’ ny famerenana indray ny voninahitry ny firenena sy ny fanajana amin’ ny antsipiriany ireo lalàm-pitondran-tena sy ny fahadiovan’ ny fombafombam-pivavahana. Ny ivon’ ny toriteny sy fahitan’ i Zakaria dia ny andro fiandrandrana ny fahatongavan’ ny Mesia.
Ny fahitan'i Zakaria: ireo mpitaingin-tsoavaly efatra, nataon'i Gustave Doré (1832-1883)
Araka ny fandinihan' ireo manam-pahaizana dia mizara roa na telo ny Bokin' i Zakaria ka ny fizaràna voalohany (toko voalohany – faha-8) dia atao hoe Prôtô-Zakaria, ny fizaràna faharoa (toko faha-9 – faha-14 na toko faha-9 – faha-11) dia atao hoe Deoterô-Zakaria, ary ny fizaràna fahatelo (toko faha-12 – faha-14) dia atao hoe Tritô-Zakaria.
1 Anaran’ny boky
2.1 Ny mpaminany Zakaria
2.2 Ny mpanoratra sy ny fotoana nanoratana
3 Ny anaran' ny boky
4 Fizaràn' ny boky
4.1 Ny Prôtô-Zakaria (1.1 – 8.23)
4.1.1 Antso fampibebahana (1.1 – 1.6)
4.1.2 Ireo fahitana valo (1.7 – 6.8)
4.1.3 Ilay mpisorona hanapaka amin’ ny fanamboarana ny Tempoly (6.9-15)
4.1.4 Faminaniana isan-karazany (7.1 – 8.23)
4.2 Deoterô-Zakaria (9.1 – 14.21)
4.2.1 Haorina indray i Jerosalema (9.1 – 11.17)
4.2.2 Hitondra ny tany rehetra ny Mesian’ Andriamanitra (12.1 – 14.21)
5 Fandraisan' ny Kristiana ny boky
Ny hoe Zakaria dia avy amin’ ny teny hebreo hoe זְכַרְיָה / zehar-Yah izay midika hoe "nahatsiaro i Yahweh". Ny fiteny grika no nanova ny e ho a eo alohan' ny z (Ζαχαρίας / Zakharias). Nanaraka izany ny Baiboly amin' ny fiteny latina (Zacharias) sy amin' ny fiteny frantsay (Zacharie) ary amin' ny fiteny malagasy (Zakaria). Ny Baiboly amin' ny fiteny anglisy dia manoratra hoe Zecharia.
Ny mpaminany Zakaria, nataon'i James Tissot, taona 1896–1902
Ny mpaminany ZakariaHanova
Ny mpaminany Zakaria dia voaresaka ao amin’ ny Bokin’ i Ezra (na Esdrasa) (Ez. 5.1 sy 6.14). Niaina amin’ ny fotoana mitovy izy sy i Hagay (na Akjea) sady ny fomba fiteniny dia ahatsapana ny akon’ ny toritenin’ i Ezekiela. Sady mpisorona izy no mpaminany. Teo anelanelan’ ny taona 520 sy 518 tal. J.K. ny fotoana niasany. Ny Evanjelin’ i Matio (Mat. 23.35 ) dia misy tantara izay milaza an' i Zakaria ho maty maritiora.
Ny mpanoratra sy ny fotoana nanoratanaHanova
Ny lovantsofina dia manao ny mpisorona sady mpaminany Zakaria (taonjato faha-6 tal. J.K.) ho nanoratra ny boky manontolo. Tsikaritra anefa fa fotoana lava loatra no mety nanoratana ny boky ka miteraka ny fiheverana fa olona roa na antokon' olona roa samy hafa no nanoratra azy, ka avahana ny hoe Prôtô-Zakaria (na Zakaria voalohany) sy ny hoe Deoterô-Zakaria (na Zakaria faharoa). Ny toko valo voalohany no mety nosoratan' ny mpaminany Zakaria. Maro ny mpikaroka mihevitra fa tany amin' ny taona 520/518 tal. J.K. no nanombohan' ny asa maha mpaminany an' i Zakaria. Maro koa ireo milaza fa mety izy tenany na ny mpianany taty aoriana kely no nandraikitra an-tsoratra ny faminaniany. Ny toko faha-9 hatramin' ny faha-14, izay miavaka loatra amin' ny toko valo voalohany dia mety voasoratra tamin' ny taonjato manaraka.
Ao koa ireo mizara ny boky ho telo ka mizara ny Deôtero-Zakaria ho roa ka ahazoana ny Tritô-Zakaria (toko faha-11 -- 14).
Amin' ny teny hebreo dia atao hoe ספר זְכַרְיָה / Sefer Zekharyāh ny Bokin' i Zakaria. Ao amin'ny Septoajinta amin'ny teny grika izy dia atao hoe Ζαχαρίας ΙΑʹ / XI Zakharías (ny ipsilôna alfa ΙΑʹʹdia manambara ny maha mpaminany madinika laharana fahiraika ambin' ny folo azy).
Ny Bokin’ i Zakaria dia fitambarana boky roa samy hafa ka ny faharoa dia nosoratana fotoana ela taty aorian’ ny nanoratana ny voalohany. Azo zaraina roa manaraka izany ny boky ka ny tapany voalohany (toko 1 – 8) dia atao hoe Prôtô-Zakaria ary ny tapany faharoa (toko 9 – 14) kosa Deoterô-Zakaria.
Ny Prôtô-Zakaria (1.1 – 8.23)Hanova
Ny toko valo voalohany dia maneho taratra ny fotoana izay nanarakaraka ny Fahababoana tany Babilôna (aorian’ ny 538 tal. J.K.) sady miresaka ny amin’ ny hanamboarana indray ny Tempoly sy hananganana an’ i Jerosalema, mba hanomanana ny fiavian’ ny andron' ny Mesia. Manindry ny amin’ ny tokony handraisan’ ny tsirairay anjara sy hankatoavana an’ Andriamanitra ny boky eto, sady manantitra ny amin’ ny fiainana ara-panahy ao anaty ary ny fahitam-paminaniana ny amin’ ny tontolo feno fiadanana izay hiarahan’ ny Jiosy (na Jody) sy ny Jentilisa (na Jentily) hivavaka amin’ Andriamanitra.
Ireo toko ireo dia azo zaraina ho telo na efatra.
Antso fampibebahana (1.1 – 1.6)Hanova
Ity dia teny fampidirana izay mitaona ny olona hibebaka; tokony ho soratra natao taty aoriana izy io izay mamintina ireo fomba fijerin’ i Zakaria ny fitondran-tena.
Ireo fahitana valo (1.7 – 6.8)Hanova
Ity fizaràna ity dia mirakitra ireo fahitana valo azon’ i Zakaria tamin’ ny alina tamin’ny taona 519 tal. J.K., izay arahina fanazavana ataon’ ny anjely tamin’ny mpaminany. Ireo fahitana ireo dia ahitana sary apôkaliptika ka manambara ny maha akaiky ny fahatongavan’ ny vanim-potoan’ ny Mesia. Ireto avy ireo fahitana:
ny mpitaingin-tsoavaly efatra,
ireo tandroka efatra,
ilay tady fandrefesana,
ilay fisoronana nohavaozina,
ilay fitoeran-jiro volamena,
ilay horonam-boky manidina,
ilay vehivavy sy ny vata famarana,
ireo kalesim-piadiana efatra.
Ilay mpisorona hanapaka amin’ ny fanamboarana ny Tempoly (6.9-15)Hanova
Ny fizaràna fahatelo (6.9-15) dia manoritsoritra ny amin’ ny fametrahana satro-boninahitra ara-panoharana eo amin’ ny mpisorona iray izay nitondra ny vahoaka amin’ ny fanamboarana indray ny Tempoly.
Faminaniana isan-karazany (7.1 – 8.23)Hanova
Ity fizaràna ity indray dia ahitana teny faminaniana mifangaro fananarana ara-pitondran-tena sy faminaniana mahakasika ny Mesia. Ny boky eto dia maneho ny famaliana ny fanontanian’ ny iraka avy any Babilona ny amin’ ny fifadian-kanina efatra atao ho fahatsiarovana ny naharesy an’ i Jerosalema tamin’ ny 586 tal. J.K. Ahitana teny faminaniana manoritsoritra izay ho endriky ny fiainana ao amin’ny Jerosalema vaovao koa ity fizaràna ity.
Deoterô-Zakaria (9.1 – 14.21)Hanova
Ny Deoterô-Zakaria dia hafa tanteraka satria tsy ahitana intsony ny anaran’ i Jôsoa mpisorona sy ny an’ i Zôrôbabela ary ny resaka momba ny fananganana indray an’ i Israely. Tsy misy ny fitenenana ny amin’ ny fanamboarana ny Tempoly faharoa. Ireo toko enina farany dia isan’ ireo soratra saro-takarina ao amin’ ny Testamenta Taloha. Miompana amin’ ny lohahevitry ny fiandrasana ny Mesia ny fitambaran’ ireo lahatsorara rehetra ireo.
Azo zaraina roa ny Deoterô-Zakaria:
Haorina indray i Jerosalema (9.1 – 11.17)Hanova
Ahitana teny faminaniana apôkaliptika misy fitenenana an-kolaka zavatra saro-takarina sady mikasika lohahevitra taloha kokoa. Ny mafonja indrindra amin’ ireo dia: ny hiverenan’ Andriamanitra, ny handresen’ ilay Mesia Mpanjaka, ny hananganana indray an’ i Israely aorian’ ny haharesen’ ireo fahavalony.
Hitondra ny tany rehetra ny Mesian’ Andriamanitra (12.1 – 14.21)Hanova
Ity fizaràna ity dia mirakitra lohahevitra apôkaliptika sy eskatôlôjika ka maneho ny voninahitra izay miandry an’ i Israely any amin’ ny Andro farany noho ny hiavian’ ny Mesia, ny ady farany sy ny fandresen’ ny fanjakan' Andriamanitra, ny fiandrasana ny fiavian’ ny andron' i Iahveh izay hampivitrana indray ny fanekem-pihavanana, ny fanadiovana an’ i Jerosalema noho ny fandresen’ i Iahveh, ny hivavahan’ ny firenen-drehetra amin’ ny Andriamanitr’ i Israely. Manantira ny mpanoratra fa ny fidirana an-tsehatry ny hery avy any an-danitra ihany ho fomba tokana ahafahana mahazo ny fanafahana amin’ ny ziogan’ ny firenena jentilisa.
Fandraisan' ny Kristiana ny bokyHanova
Ny Kristiana dia manome lanja manokana andalana maro ao amin’ ireo toko enina farany ireo izay heveriny ho faminaniana tanteraka tamin’ny alalan’ i Jesoa Kristy. Ny 9.9 dia heveriny ho mifandray amin’ ny fidiran’ i Jesoa amim-pandresena tao Jerosalema; ny 9.10 dia mifandray amin’ ny fanjakany eran’izao rehetra izao; ny 11.12 kosa mifandray amin’ ny famadihan’ i Jodasy azy tamin’ ny vola telopolo; ny 12.10 sy ny 13.6 dia mifandray amin’ ny ratra nahazo an’ i Jesoa; ny 13.7-9 mifandray amin’i Jesoa amin’ ny maha mpiandry tsara azy izay nohelohina mba hanavotany ny ondriny.
↑ "(…) mba hanody anareo ny rà marina rehetra, izay nalatsaka tambonin'ny tany, hatramin'ny ran'i Abela marina ka hatramin'ny ran'i Zakaria, zanak'i Barakia, izay novonoinareo teo anelanelan'ny tempoly sy ny alitara." (Mat. 23.35 -- Ny Baiboly).
↑ "Zacharie, Livre de", in Encarta 2009.
↑ "Mifalia indrindra, ry Ziona zanakavavy; Manaova feo fifaliana, ry Jerosalema zanakavavy; Indro, ny Mpanjakanao avy ho anao; Marina Izy sady manam-pamonjena, Malemy fanahy sady mitaingina boriky Dia zana-boriky tanora" (Zak. 9.9 -- Ny Baiboly).
↑ "Ary hofoanako tsy hisy kalesy intsony Efraima, Na soavaly any Jerosalema, Hofoanana koa ny tsipìka fiadiana, Ary hiteny fiadanana amin'ny jentilisa Izy; Ny fanapahany dia hatramin'ny ranomasina ka hatramin'ny ranomasina Ary hatramin'ny Ony ka hatramin'ny faran'ny tany." (Zak. 9.10 -- Ny Baiboly)
↑ "Dia hoy izaho taminy: Raha tsara eo imasonareo, dia omeo ahy ny karamako; fa raha tsy izany, dia aoka ihany. Ary dia nolanjainy ny karamako, ka sekely volafotsy telo-polo" (Zak. 11.12 -- Ny Baiboly).
↑ "Ary haidiko amin'ny taranak'i Davida sy amin'ny mponina any Jerosalema ny fanahin'ny fahasoavana sy ny fifonana, ka hijery Ahy Izay nolefoniny izy, ary hisaona Azy toy ny fisaonana zanakalahy tokana izy sady halahelo Azy toy ny fahalahelovan'ny olona ny lahimatoany" (Zak. 12.10 -- Ny Baiboly)
↑ "Dia hisy hanao aminy hoe: Ka inona itony ratra amin'ny tananao itony? Dia hovaliany hoe: Naratra tao an-tranon'ny sakaizako ireny" (Zak. 13.6 -- Ny Baiboly).
↑ "Mifohaza, ry sabatra, hamely ny mpiandriko sy ny lehilahy namako, hoy Jehovah, Tompon'ny maro. Asio ny mpiandry, dia hihahaka ny ondry, ary hamerina ny tanako ho amin'ny madinika Aho. Ary amin'ny tany rehetra, hoy Jehovah, ny androatokony dia haringana ho faty ao; fa ny ampahatelony sisa no havela ao kosa. Ary ho entiko miditra amin'ny afo ny ampahatelony, ary harendrika toy ny fandrendrika volafotsy izy, ary hizahako toetra toy ny fizaha toetra ny volamena izy; hiantso ny anarako izy, ary Izaho hamaly azy; Izaho hanao hoe: Oloko izy ary izy hanao hoe: Jehovah no Andriamanitro". (Zak. 13.7-9 -- Ny Baiboly)
Hita tao amin'ny "https://mg.wikipedia.org/w/index.php?title=Bokin%27_i_Zakaria&oldid=1041933"
Dernière modification le 19 Desambra 2021, à 06:30
Voaova farany tamin'ny 19 Desambra 2021 amin'ny 06:30 ity pejy ity.